Kullan ay Muqdisho ku yeesheen golaha wasiiradda oo go’aamo muhiim ah laga soo saaray (AKHRISO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Kullan ay Muqdisho ku yeesheen golaha wasiiradda oo go’aamo muhiim ah laga soo saaray (AKHRISO)
Golaha wasiirada ee xukuumada federaalka Soomaaliya ayaa maanta kullankoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyagoona kulankaasi uu shir-guddoominayay ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Waxyaabaha ugu waaweynaa ee kullankaasi looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa amniga iyo xasillinta dalka iyo shirka ka furmay magaalada London ee caasimadda dalka UK.
Golaha wasiirada ayaa u mahad-celiyey sida dowladda UK ay uga qeyb qaadatay sidii shirkaas London ku dhici lahaa, islamarkaaana shacabka iyo dowladda Soomaaliya looga saacidi lahaa dhanka nabadeynta, sugidda amniga, iyo sidii dalka looga hirgelin lahaa doorashooyin hal cod iyo hal qof ah.
Sidoo kale, waxay golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ka mahad celiyeen doorka ay beesha caalamka iyo qaramada Midoobay ka qaateen in shirka London uu qabsoomo.
Dhinaca kale, golaha wasiirada ayaa warbixin ku saabsan sugida amniga iyo nabadeynta dalka ka dhageeystay taliyeyaasha ciidamada booliiska, xooga dalka iyo kuwa nabad sugida amniga qaranka.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo hadal kooban ka jeediyay kulanka ayaa taliyeyaasha ciidanka ku ammaanay warbixintooda, qorsheyaasha ay soo jeediyeen iyo sida ay uga go’antahay in dalka loo nabadeeyo.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa cod geliyey go’aamada lagu sugaayo amniga, waxayna xubnaha golaha wasiirada dhamaantood cod aqlabiyad leh isagu raaceen go’aamadaan hoos ku xusan:-
Go’aanadan ayaa ah kuwa la waafajinaya dastuurka, shareecada islaamka iyo shuruucda u degsan dalka.
5. Laga bilaabo 11/May/2017 waxaa mas’uuliyiinta dowladda ee haysta hubka, gaadiidka iyo ciidanka XDS, laga doonayaa inay ku celiyaan taliska ciidanka XDS muddo 10 casho gudohood.
7. Iyadoo la fulinaayo jiheynta iyo tilmaamaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxay guddiga amniga qaranka go’aamiyeen in degmada Afgooye ay ka mid noqoto howlgalka xasilinta caasimadda.
8. Waxaa taliska ciidanka boliiska laga doonayaa in muddo 60 casho ku eg ay kusoo dhisaan ciidamo gaar ah oo ilaaliya madaxda qaranka iyo goobaha muhiimka ah ee dowladda.
12. Howlgalka xasilinta caasimadda wuxuu u bilaaban doonaa si deg-deg ah, inta ka horaysana ciidan waliba kaalinta howlgalka kaga soo aadday ciidan iyo qalab waa inuu ku wareejiyaa taliyaha howlgalka.
13. Maamulka gobolka Banaadar ayaa ka howlgalaya abaabulka iyo baraarujinta dadweynaha iyagoo kaashanaya wasaarada warfaafinta, bulshada qaybaheeda kala duwan, iyo hay’adaha amniga.
b. Doorka wacyi-gelinta bulshada oo ka baxaya warbaahinada dowladda iyo kuwa madax-banaan.